Maalgelin macquul ah oo dhan 3.600 milyan oo doolar oo Apple ah oo ku taal Kia ee "Apple Car" waa la sifeeyaa | Waxaan ka socdaa mac
Suurtagalnimada $ 3.600 bilyan oo maalgashi Apple ah oo ku taal Kia ayaa loo daadiyay si loo sameeyo "Apple Car"
Waa markii ugu horreysay ee mashruuc Apple uusan iga farxin gabi ahaanba. Mana aha inaanan jeclayn baabuurta, inaan jeclahay, laakiin waxaan aad u caddaynayaa inay noqonayso wax soo saarkii ugu horreeyay ee Apple taasi, sida iska cad, ma awoodo inaan iibsado xitaa haddii aan rabo.
Waxaan ku raacsanahay in aaladaha Apple ay leeyihiin qiimo sare, laakiin yaa ka badan iyo ka yareeya, xitaa haddii ay tahay in lagu bixiyo seddex sano gudahood, waxay awoodi karaan inay iibsadaan iPhone, iPad, Mac, ama xitaa AirPods Max, iyadoon loo eegin qaali ayey yihiin. Laakiin a Apple Car, mar dambe ma heli doono dadka badankood, oo aan anigu ku daro. Maanta waxaan haynaa xan cusub oo ku saabsan mashruuca "Apple Car".
Warbixin ka socota wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed Dong-A, wuxuu sharxayaa in Apple iyo Kia Motors waxay ka wada xaajoonayaan inay gaaraan heshiis wax soo saar gaariga ugu horreeya ee shirkadda Cupertino.
Maqaalkani wuxuu sheegayaa in Apple iyo Kia ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis kaas oo shirkadda teknoolojiyaddu ay maalgashan doonto ilaa 4 bilyan oo lagu guuleystay (ku saabsan 3.600 Milyan dollar) dadaal wada shaqeyn ah oo lala yeeshay Kia si loo soo saaro kii ugu horreeyay "Apple Car."
Maalgashiga noocan oo kale ah wuxuu noqonayaa in la ballaariyo xarumaha wax soo saarka Mareykanka ee Kia Motors ee Georgia. Hadafku wuxuu noqonayaa in la bilaabo wax soo saarka sanadka 2024 iyadoo la bilaabayo awood bilow ah 100.000 oo baabuur sanadkiiIn kasta oo rakibidda ay kori karto ugu badnaan 400.000 oo unug sanadkii.
Shuruudaha qandaraaska lama garanayo mana cadda waxa dhabta ah ee maalgashiga la sheegayo. Xiisaha kooxda baabuurta ayaa laga hadlay toddobaadyo Kia-Hyundai la shaqeynta Apple si ay u soosaarto "Apple Car" kii ugu horreeyay taariikhda dhirteeda.
Wararka qaar ayaa sheegaya in agaasimayaasha soo saaraha gawaarida ee Kuuriya ay ka labalabeenayaan inay Apple macaamiil ahaan u yeeshaan Waxay wali codsadeen warbixinno maaliyadeed waxayna sugayaan inay arkaan haddii Apple uu milan yahay iyo in kale ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Suurtagalnimada $ 3.600 bilyan oo maalgashi Apple ah oo ku taal Kia ayaa loo daadiyay si loo sameeyo "Apple Car"
Podcast 12x7: macruufka 14.5, diiwaangelinta iyo rikoodhka Apple